Nkwekọrịta nke ịankụ mmanya 1 | Njem zuru oke
Nkwekọrịta nke ịankụ mmanya 1
Nkwekọrịta nke ite (Nanjing Treaty) bụ nkwekọrịta na-enweghị usoro mechiri nke mbụ Agha Opium n'etiti alaeze Britain na Alaeze Qing na 1839-42.
1 Nkwekọrịta nkwekọrịta
2 Ahịa ahia
N'ihi mmeri China meriri n'Agha Opium, ndị nnọchianya nke Alaeze Ukwu Britain na Qing gbara nkwekọrịta nkwekọrịta udo n'ụgbọ agha Britain bụ HMS Cornwallis na Nanjing. Na August 29, 1842, onye nnọchi anya Britain Sir Henry Pöttinger na ndị nnọchi anya Qing, Messrs Qiying, Ilibu na Niujian bịanyere aka na ya. Nkwekọrịta nke ite. Nkwekorita ahụ nwere isiokwu iri na atọ ma Queen Victoria na Emperor Daoguang kwadoro ya ọnwa iri ka e mesịrị.
Ebumnuche bụ isi nke nkwekọrịta ahụ bụ ịgbanwe atụmatụ e si na-achịkwa azụmaahịa mba ofesi kemgbe 1760. Nkwekọrịta ahụ kagburu ikike nke mba iri na atọ gbasara azụmaahịa mba ofesi na Canton wee weghachite ọdụ ụgbọ mmiri ise iji zụọ ahịa, Canton, Amoy, Foochow, Ningpó na Shanghai, ebe ndị Britain nwere ike ịzụ ahịa na-enweghị mmachi. Briten nwetakwara ikike inye ndị consula na ọdụ ụgbọ mmiri ndị edere aha na nkwekọrịta ahụ, bụ ndị enyere ikike iso ndị ọchịchị obodo China na-ekwurịta okwu. Nkwekọrịta ahụ bụ nke mbụ na usoro nkwekọrịta dị iche iche, nke a na-akpọkarị "nkwekọrịta enweghị aha," nke China na mba ndị ọdịda anyanwụ banyere na narị afọ nke XNUMX. Nkwekọrịta ahụ kwuru na ahia na ọdụ ụgbọ mmiri ndị egosiri ga-edozi ọnụego a kapịrị ọnụ, nke a ga-ehiwe n'etiti Ndị ọchịchị Britain na Qing.
Ozi ndị ọzọ - History of Hong Kong 1
Isi mmalite - Klas nke akụkọ ihe mere eme
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nkwekọrịta nke ịankụ mmanya 1
Obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri Portugal: Nazaré
Bọchị Ọrụ na Japan